शरीर तातो हुने, टाउको दुख्ने, पेटमा अप्ठ्यारो महसुस र झमझम किन हुन्छ ? – Mission
यो यस्तो रोग हो जसमा बिरामीहरूले विभिन्न रोगको लक्षण अनुभव गर्छन् । बिरामीहरू वर्षौंसम्म अनौठो लक्षणले ग्रसित हुन्छन् । रोग निको नहुँदा बिरामीहरू डाक्टरकहाँ जान्छन् र एक्सरे, इन्डोस्कोपी आदि गराउँछन् ।
कतिपय बिरामी क्यान्सर भएको शंका गर्छन् भने कतिपय बिरामी एड्स भयो भनेर चिन्तित हुन्छन् । यस्ता बिरामीहरू डाक्टरकहाँ जान्छन् तर समस्या भने मनोवैज्ञानिक हुन्छ ।
कसै–कसैमा वंशानुगत रूपमा यो रोग पाइन्छ । कतिपय टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, हात–खुट्टा नीलो भएको, सुन्निएको महसुस गर्छन् तर वास्तविक रूपमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । कोही नाक, मुख आदिमा गडबडी भएको वा बिग्रिएको महसुस गर्छन् भने कोही आन्द्रा कुहिएको शंका गरी चिकित्सककहाँ पुग्छन् ।
शरीरका विभिन्न अंगमा रोगका लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्दा कुनै रोग देखिँदैन । यस्ता रोगका लक्षण अनौठा हुन्छन्, देब्रे खुट्टामा हानेको सिर्का दाहिने हातसम्म पुग्छ । शरीरभरि तातो महसुस हुन्छ । गुप्ताङ्गमा गडबडी भएको त तातो अनुभव भएको, झमझम गर्ने र शारीरिक सम्पर्क कम भएको महसुस हुन्छ । बिरामीहरू यस्ता लक्षण देखिएपछि चिकित्सककहाँ जान्छन्
कोही एड्स भएको र कोही क्यान्सर भएको शंका गर्छन् । अपच भएको महसुस गर्छन् । पेट पोलेको वा पेटमा अप्ठ्यारो महसुस गर्छन् । टाउको दुख्छ । मुटुको ढुकढुकी बढ्छ । ढाड दुख्छ । पखाला लागेको वा कब्जियत भएको अनुभव बारम्बार गर्छन् । कसै–कसैले शरीरका अंग बिग्रिएको महसुस गर्छन् । पेटमा हावा भरिएको अनुभूति हुन्छ । मुटु ढुकढुक गर्छ । छिटो–छिटो सास फेर्छन् ।
यो रोगका धेरै कारण छन् । यद्यपि मनोवैज्ञानिक समस्या नै यसको प्रमुख कारण हो । दिनहुँ हुने नराम्रा घटनाहरू, चिन्ता, रोगका सम्बन्धमा थोरै जानकारी आदिले गर्दा हाम्रो बेहोसी मस्तिष्कमा यस्ता नकारात्मक कुरा सञ्चित भएर बसेका हुन्छन् जसले गर्दा यस्ता लक्षण आएको विश्वास गरिन्छ ।
त्यसबाहेक हाम्रो मस्तिष्कको नसामा न्युरोट्रान्समिटर भन्ने वस्तुमा गडबडी हुन्छ जसलाई सिटी स्क्यान एवं एम. आर. आई.जस्ता आधुनिक परीक्षणले पनि देखाउन सक्दैनन् ।
अनावश्यक कुरामा बारम्बार एकोहोरो गहिरो सोच नलिने । अर्काको उपलब्धिलाई सजिलै ग्रहण गर्ने र खुसी हुने । पुराना कुरामा विश्वास नगर्ने । हरेक काममा खुसी, सन्तुष्ट र सुखी हुन सिक्ने । जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुने तर परिश्रम गर्न नछाड्ने ।
लागूपदार्थ एवं रक्सी सेवन गर्दा मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुने भएकाले ती वस्तुबाट टाढै रहने। दैनिक जीवनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने । समाज वा घरपरिवारबाट नकारात्मक वातावरण अन्त्य गर्ने । अति नैतिकवान् नबन्ने र अरूबाट पनि त्यस्तो आशा नगर्ने ।
शरीरका विभिन्न अंगको समस्या एकैपटक आउने हुनाले यो नसाको समस्या हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । बिरामी उपचारका लागि सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ । रोगका बारेमा अनावश्यक शंका गर्नुहुँदैन । खानामा खासै बार्नु पर्दैन, सामान्य मानिसले खाने खाना खानुपर्छ । सम्बन्धित विशेषज्ञको रायअनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
यस्ता बिरामीले औषधि सेवन गरेको एक हप्तापछि मात्र समस्या समाधान भएको महसुस गर्छन् । कतिपय बिरामी घरायसी, जागिर, अध्ययन आदि समस्याबाट पीडित हुन्छन् । यस्ता बिरामी यी समस्याबाट निकै चिन्तित हुन्छन् तर त्यसरी आत्तिनु पर्दैन । कतिपय बिरामी शरीर पोल्ने हुनाले नुहाउँछन् । पाठेघरको शल्यक्रियापछि धेरै महिलामा यस्तो समस्या देखा पर्नसक्छ ।
(नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डा. सी. पी. सेडाईंसँगको कुराकानीमा आधारित समाग्री )
प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८ 2:58:28 PM |
Prevगर्भ बसेको प्रारम्भिक लक्षण र संकेत के-के हुन् ?
Nextमोडल निशा घिमिरेको अवस्था नाजुक